C2H4 (အီသီလင်း) + H2O (ရေ) + KMnO4 (ပိုတက်စီယမ်နိတ်) = KOH (ပိုတက်ဆီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်) + MnO2 (မန်းဂနိစ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်) + C2H4(OH)2 (Glycol; 1,2-Ethanediol; Ethylene glycol; sym-DCIethanene -C-00920; Ucar-17; Norkool; Dowtherm SR-1; Tescol; 1,2-Dihydroxyethane; Macrogol 400BPC; Zerex; Fridex; ချဉ်းကပ်လမ်း၊ 2-Hydroxyethanol; 2-Hydroxyethyl အရက်၊ Ethane-1,2-diol) | မျှတသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှု ညီမျှခြင်း
C2H4 H2O KMnO4 = KOH MnO2 C2H4 (OH)2| ဓာတုညီမျှခြင်း Balancer
ပိုတက်စီယမ်နိတ် = Glycol; 1,2-Ethanediol; Ethylene glycol; sym-Dioxyethane; NCI-C-00920; Ucar-17; Norkool; Dowtherm SR-1; Tescol; 1,2-Dihydroxyethane; Macrogol 400BPC; Zerex; Fridex; ချဉ်းကပ်လမ်း 2-Hydroxyethanol; 2-Hydroxyethyl အရက်; Ethane-1,2-diol
2 ရလဒ်များ တွေ့ရှိရ
ကနေညီမျှခြင်းပြသခြင်း 1 သို့2စာမျက်နှာ ၁ - နောက်ထပ်ရလဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်အဆုံးသို့ scroll လုပ်ပါ
3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2ကို + 2MnO2 + 3C2H4(အို)2
Ethylene ရေ ပိုတက်စီယမ်နိတ် ပိုတက်စီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ် မန်းဂနိစ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် Glycol; 1,2-Ethanediol; Ethylene glycol; sym-Dioxyethane; NCI-C-00920; Ucar-17; Norkool; Dowtherm SR-1; Tescol; 1,2-Dihydroxyethane; Macrogol 400BPC; Zerex; Fridex; ချဉ်းကပ်လမ်း 2-Hydroxyethanol; 2-Hydroxyethyl အရက်; Ethane-1,2-diol
(khi) (လန်) (ရက်) (ရက်) (rn) (ရက်)
(khôngmàu) (đentím) (အဲ)
342223Hệsố
ညီမျှခြင်း 3C ၏ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(အို)2
C2H4 (ethylene) ၏ တုံ့ပြန်မှု အခြေအနေ သည် H2O (ရေ) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး KMnO4 (ပိုတက်ဆီယမ် ပါမန်းဂနိတ်) နှင့် ဓာတ်ပြုသည် ။
အပူချိန်: အပူအအေး အရည်ပျော်ပစ္စည်း: Ni
တုံ့ပြန်မှုများ မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး KOH (ပိုတက်စီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်) နှင့် MnO2 (မန်းဂနိစ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်) နှင့် C2H4(OH)2 (Glycol; 1,2-Ethanediol; Ethylene glycol; sym-Dioxyethane၊ NCI-C-00920၊ Ucar-17; Norkool၊ ; Dowtherm SR-1; Tescol; 1,2-Dihydroxyethane; Macrogol 400BPC; Zerex; Fridex; အဲလိုမျိုး၊ 2-Hydroxyethanol; 2-Hydroxyethyl အရက်၊ Ethane-1,2-diol) ?
C2H4 (ethylene) သည် H2O (ရေ) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီးနောက် KMnO4 (potassium permanganate) နှင့် ဓာတ်ပြုသည်။
ဓာတုတုံ့ပြန်မှု 3C နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်မေးခွန်းများ2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(အို)2
Reactant C2H4 (ethylene) နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများ
C2H4 (ethylene) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ C2H4 (ethylene) ဓာတ်ပြုခြင်းအဖြစ် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများသည် အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် KOH (ပိုတက်စီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်) နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ
KOH (ပိုတက်စီယမ်နိတ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် KOH (ပိုတက်စီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်) ပါရှိသည့် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် C2H4(OH)2 (Glycol; 1,2-Ethanediol; Ethylene glycol; sym-Dioxyethane; NCI-C-00920; Ucar-17; Norkool; Dowtherm SR-1; Tescol; 1,2-Dihydroxyethane; Macrogol 400BPC၊ Zerex၊ Fridex၊ ချဉ်းကပ်လမ်း၊ 2-Hydroxyethanol၊ 2-Hydroxyethyl အရက်၊ Ethane-1,2-diol)
C2H4(OH)2 (ပိုတက်စီယမ်နိတ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာကား အဘယ်နည်း။ C2H4(OH)2 (Glycol; 1,2-Ethanediol; Ethylene glycol; sym-Dioxyethane; NCI-C-00920; Ucar-17; Norkool၊ Dowtherm SR-1; Tescol; 1,2 ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။ -Dihydroxyethane; Macrogol 400BPC; Zerex; Fridex; ချဉ်းကပ်လမ်း; 2-Hydroxyethanol; 2-Hydroxyethyl အရက်၊ Ethane-1,2-diol) ထုတ်ကုန်အဖြစ်?
(khi) (လန်) (rn) (နောက်ချေး) (kt) (လန်)
(khôngmàu) (khôngmàu) (မင်း) (khôngmàu) (အဲ) (khôngmàu)
ကနေညီမျှခြင်းပြသခြင်း 1 သို့2စာမျက်နှာ 1